४ तारे झण्डा बोकेर कांग्रेसको भेट माग्दै हिँड्ने केसी कम्युनिष्ट विरोधी हुन् : योगेश भट्टराई
Posted on January 16, 2019 by S NP
काठमाडौं : नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अडान अलोकतान्त्रिक रहेको संकेत गर्दै उनले संसदको अधिकारलाई नै ‘च्यालेन्ज’ गरेको बताएका छन् ।
तर यसरी संसदको अधिकारमाथि डा. केसीले च्यालेन्ज गर्न नपाउने नेता भट्टराईको टिप्पणी थियो । सरकारले पठाएका विधेयक संसदमा छलफल हुन नदिएरै त्यसको अधिकार रोक्नु अलोकतान्त्रिक रहेको उनको भनाइ छ ।
डा. केसी इलाममा अनशन बसिरहेको अवस्थामा सत्तारुढ दलका नेता योगेश भट्टराई पनि इलाम पुगेर यस्तो बताएका हुन् । सरकारले पठाएका विधेयक संसदले हुवहु लागु गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले संसदमा छलफल हुन दिनुपर्ने बताए ।
‘डा. केसी र कांग्रेस उस्तै’
नेता योगेश भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनको क्रममा डा. गोविन्द केसीलाई कांग्रेसको पर्यायवाची रुपमै तुलना गरेका थिए । उनले ‘कांग्रेस र डा. केसी एकै सिक्काका दुई पाटा’भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
‘डा. केसी र नेपाली कांग्रेस छुटिँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँहरु एकै सिक्काको दुई पाटा हो ।’ मेडिकल शिक्षालाई गैरनाफामुलक तथा सेवामुलक बनाउने सरकारले नीति ल्याएकोमा कांग्रेस र डा. केसीले त्यसमा आपत्ति जनाएको भन्दै नेता भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘कम्युनिष्ट विरोधी केसी’
डा. केसी कम्युनिष्टविरोधी रहेको समेत उनको टिप्पणी छ । कांग्रेसको जयजकार गर्ने केसी विशुद्ध व्यवसायीक हुन नसक्ने उनको जिकिरछ । ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केपी ओलीकै नाम लिएर विरोध गर्ने । उहाँमा कम्युनिष्ट फोबिया छ,’ नेता भट्टराईले भने ।
२०४८ सालमा कांग्रेसको सरकार बन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्धाधुन्धा रुपमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा ध्यान दिएको र शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सेवामुलक र नाफामुखी बनाउनेतर्फ लागेको बताए ।
घटनाक्रमले डा. केसीलाई कम्युनिष्ट विरोधी पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । केसीलाई लक्षित गर्दै भट्टराईले अघि भनेका छन्, ‘कांग्रेसको जयजकार गर्ने, कांग्रेस महासमिति सदस्यले मेडिकल कलेजमा लगानी गर्दा केही नबोल्ने, राम्रो विधेयक ल्याउने कम्युनिष्ट सरकारको विरोध गर्ने !’ भट्टराईले डा. केसीलाई कांग्रेसको झण्डा बोकेरै चुनावमा भोट मागेको भन्दै उनी निश्पक्ष नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘चुनावमा कांग्रेसको चारतारे झण्डा बोकेर भोट माग्दै हिँड्ने, कांग्रेसको जयजकार गर्ने उहाँ विशुद्ध व्यवसायीक हुनुहुन्न । टिचिङमै अनशन बस्दा कांग्रेसका नेताहरु जाँदा केही भएन । माधव नेपाल पुगेपछि हुटिङ नै गरियो । एमालेमाथि आक्रमण नै भयो ।’
यसबाहेक कुनै समूहले डा. केसीलाई ‘गोटी’ बनाइरहेको पनि दावी गरे । फुजेल हत्याकाण्ड सहित द्धन्द्धका घटना कोट्याउँदै कुनै समुहले केसीलाई पनि ‘गोटी’ बनाएको बताए । साथै नन्दप्रसाद अधिकारीकी श्रीमती गंगामायालाई फोटो खिचाउने र गोविन्द केसीलाई अनशन बसाउने एकै समुह भएको पनि उनको दावी थियो । तर त्यस्ता समुहको गोटी नबन्न आग्रह गरेका छन् ।
डा. केसीले विधेयकको पूर्ण पृष्ठ समेत नपढेको भन्दै पढ्नका लागि नेता भट्टराईले आग्रह गरेका छन् । कम्युनिष्ट सरकारले राम्रो विधेयक ल्याउन लागेकोमा केसीले नपढिकनै विरोध गरेको उनको टिप्पणी छ ।
कृष्ण र रुपालाई भेट्न सहयोगको चाङ बोकेर पुगे भाग्य न्यौपाने (भिडियो सहित)
के तपाईलाई थाहा छ पुरानो सिडीमा चाँदी हुन्छ ? जसमा हुन्छ चाँदी नै चाँदी पाइन्छ,यसरी निकाल्नुहोस चाँदी ( भिडियो)